Gbasara anyị - Beijing Kwinbon Biotechnology Co., Ltd.
Ihe Nleta Elisa
Testgba ule ọsọ ọsọ
Ọka & ndepụta
Akwụkwọ nri & Mkpụrụ osisi
Beijing Kwinbon biotechnology Co., Ltd. hiwere na China Agricultural University (CAU) n'afọ 2002. Ọ bụ ọkachamara nri dianostics emeputa nri, ndepụta na aku na uba na osisi nchekwa.
N'ime afọ 18 gara aga, Kwinbon Biotechnology keere òkè na R&D na imepụta nyocha nke nri, gụnyere enzyme jikọtara immunoassays na eriri immunochromatographic. Ọ nwere ike ịnye ihe karịrị 100 ụdị ELISA na ihe karịrị ụdị 200 ngwa ngwa ngwa ngwa maka nchọpụta nke ọgwụ nje, mycotoxin, pesticides, nri nri, homonụ gbakwunye n'oge nri anụmanụ na ịkwa iko nri.
O nwere ụlọ nyocha R&D karịrị 10,000 square mita, ụlọ ọrụ GMP na SPF (Specific Pathogen Free) ụlọ anụmanụ. Site na teknụzụ ohuru ohuru na echiche okike, ihe karịrị antigen 300 na antibody antibody maka ule nchekwa nri.
Ruo ugbu a, ndị ọrụ nyocha sayensị anyị nwetara ihe dị ka 210 mba na mba mebere patent, gụnyere atọ PCT mba mepụtara patent. Ihe kariri 10 ihe nlere di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche karie na China di ka usoro nyocha nke mba site na AQSIQ. asambodo sitere na ILVO maka ngwa ngwa ngwa ngwa nke mmiri ara ehi sitere na Belguim.
Kwinbon Biotech bụ ụlọ ọrụ ahịa na ndị ahịa na-echekwa afọ ojuju nke ndị ahịa na ndị mmekọ azụmahịa. Ebumnuche anyị bụ ichekwa nri maka mmadụ niile site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na tebụl.
Dr. He Fangyang bidoro gụsịrị akwụkwọ maka agụmakwụkwọ nchekwa na CAU.
Dr. O mepụtara Kit mbụ Clenbuterol McAb CLIA na China.
E guzobere Beijing Kwinbon.
Enyere ọtụtụ ikike na asambodo teknụzụ.
Wuru 10000㎡ ụwa-klas nri nchekwa hightech base.
Dr. Ma, onye bụbu osote onye isi oche nke CAU, guzobere ndị otu R&D ọhụrụ na ọtụtụ ndị postdoctors.
Ọganihu ngwa ngwa ma bido alaka ụlọ ọrụ Guizhou Kwinbon.
Ihe karịrị ụlọ ọrụ 20 wuru na China niile.
Akpaka chemiluminescence immunoanalyzer malitere na
E hiwere alaka ụlọ ọrụ Shandong Kwinbon.
Company malitere ndepụta nkwadebe.